एमालेले संस्थागत निर्णय गरेर एमसीसी माने पनि म मान्दिनँः भीम रावल - Kantipath.com
एमालेले संस्थागत निर्णय गरेर एमसीसी माने पनि म मान्दिनँः भीम रावल
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष डा. भीम रावलले नेकपा विघटन गर्ने, एमाले फुटाउने र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गरी नेपाललाई उपनिवेश घोषित गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाएका छन् । एमसीसीका गलत प्रावधान संशोधन नगरी संसद्बाट पारित गर्नुजस्तो ठूलो राष्ट्रघात र देशद्रोह केही नहुने उनको भनाइ छ ।
नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता डा. रावलले भने, “एमसीसीकी उपाध्यक्ष नेपाल भ्रमणमा आउने बेला पारेर भदौ २३ गते संसद्को अधिवेशन बोलाउनुले एमसीसी पारित गर्ने षड्यन्त्रको गन्ध आइरहेको छ । नेपाली मन र नेपालीपन भएका हरेकले सोच्नुपर्ने कुरा हो भने आज भारत–चीन, चीन–अमेरिकाजस्ता ठूला शक्तिराष्ट्रबीच स्वार्थको द्वन्द्व छ । त्यसको भुमरीमा परेर नेपाललाई अफगानिस्तान किन बनाउने ? यसबारेमा माधव नेपाल, प्रचण्ड, देउवाहरु किन बोलिरहेका छैनन् ?”
उनले आफ्नो पार्टी एमालेले एमसीसी पास गर्ने संस्थागत निर्णय लिए पनि आफूले नमान्ने घोषणा गरे । उनले भने, “पार्टीको निर्णय म जान्दिनँ । एमसीसीका सन्दर्भमा कुनै अनुशासन पनि मान्दिनँ । म राष्ट्रविरुद्धको अपराधको साक्षी बन्दिनँ ।”
उनले भने, “डलरको खेती गर्नेहरुले मसँग टेलिभिजन बहस गरुन् । एनसेलले नेपाललाई ७५ अर्ब कर तिर्न बाँकी छ भने ५५ अर्ब कुन ठूलो पैसा हो र ? त्यो पनि अधिकांश रकम उनीहरुकै परामर्शदाताले लैजान्छन् । यति खतरानाक सम्झौतालाई आँखा चिम्लेर पारित गर्न खोज्नु जस्तो घिनलाग्दो र लज्जास्पद केही हुने छैन ।”
Previous Previous post: Spirituality and Peace of Mind : Ishwor Chaulagain
Next Next post: गृहले निकाल्यो यस्ताे विज्ञप्ति, नकारात्मक टीकाटिप्पणी गरे कडा कार्वाही गर्ने